5 yeakanakisa uye anonyanya kufarirwa shongwe yekudzivirira mitambo pane android uye ios
Kuru Nhau & Ongororo 5 yeakanakisa uye anonyanya kufarirwa shongwe kudzivirira mitambo pane Android uye iOS
5 yeakanakisa uye anonyanya kufarirwa shongwe kudzivirira mitambo pane Android uye iOS
Shongwe yekudzivirira mitambo iri pakati pemhando dzakasarudzika mumitambo yekutamba. Ivo vanoratidzira musanganiswa wakakodzera wezano uye chiito chakasanganiswa muropa, nguva-yakaedzwa Gameplay fomula. Tichifunga nezve mukurumbira wavo, hazvishamise kuti vaparidzi vemitambo vari kushingairira munzvimbo yekudzivirira shongwe, vachiburitsa mazita matsva uye ekuda mazuva ese.
Kune & apos; s humongous dzakasiyana siyana shongwe dziviriro mitambo kunakidzwa pane ese ari maviri Android uye iOS. Kukurerutsira mukati, isu & maapos; takakomberedza shanu yemhando yepamusoro-yakatarwa shongwe yekudzivirira mitambo pane ese mapuratifomu enhare. Hunhu hwavo hunoratidzwa nekuzivikanwa kwavo, izvo zvinokuvimbisa iwe zvikamu zvevazhinji zvevazhinji uko iwe & apos; uchadzivirira kugadzirisa kwako kune vanopokana chaiko, uye ramba uchitora yavo. Tarisa uone mazita ari pazasi uye ubatanidze kunakidzwa!
Shongwe Kupenga 2: 3D Dziviriro
Chinokosha chekudzivirira shongwe, iyo inozivikanwa TM2 inoratidzira mamamepu makumi manomwe, mishandirapamwe minomwe ine yakasarudzika mitambo yemitambo, shongwe dzine simba gumi (dzinosanganisira pfuti yetiroko, chombo chinokanda zvombo, pfuti yeplasma, nepfuti yepfuti), vavengi 16 vatorwa vane hunyanzvi hwakasiyana uye kusasimba, makwikwi evazhinji. neshamwari dzako (ona kuti ndiani ane nguva yekumhanyisa pamabhodhi evatungamiriri), uye rutsigiro rwemutambo wepadhi, pakati pezvimwe zvakanaka zvakawanda.
Dhawunirodha pane Android kana ios
Shongwe Kupenga 2
Vadziviriri 2: Shongwe Dziviriro
Vadziviriri 2 vakagadzwa mune inozivikanwa yePrime World uye inomiririra yakasarudzika kusanganiswa kweshongwe yekudzivirira uye yakaunganidzwa kadhi mitambo! Iyo Prime World, iwe unoona, inyika isinganzwisisike uye yemashiripiti, yakarohwa nenjodzi iyo yakaunza zviumbwa zvine simba uye hupfumi hukuru hwakachengetedzwa nemhomho yezvikara.
Basa rako nderekuvaka yako dziviriro uye kurwisa vazhinji vezvakaipa uchishandisa mashiripiti uye shongwe simba. Iwe unotora makumi mana akasarudzika shongwe uye makumi maviri anouraya mashiripiti, kusimudzira shongwe yako uye kuperesa kuunganidzwa neRunes ine simba, kupwanya makumi maviri emhando dzemhando uye 29 akasiyana mabhosi, kurwisa vamwe vatambi, uye kuyedza kuzvidzivirira kwako nehusiku hwekupona husiku hunoratidza chamupupuri uye dutu simba matambudziko.
Vadziviriri 2 Shongwe Dziviriro
Dziviriro yeCastle 2
Castle Defense 2 ndiyo yakateerana kune yekutanga shongwe yekuzvidzivirira mutambo iyo inoratidza pamusoro pezviuru zviuru gumi zvevatambi pasi rese. Inobatanidza yechinyakare shongwe yekuzvidzivirira Gameplay neRPG zvinhu uye zvese zvitsva Hondo Pets. Iwe unopinda mhedzisiro yehondo iyo & apos; s yakapedza makumi emakore, kusangana nemasimba magamba, mashiripiti ekare, uye kusangana nehunyanzvi zano revakuru vatungamiriri.
Rudzi rwevanhu rwakakwanisa kuzvidzivirira uye kudzorera kurwisana kwema orcs, asi rugare rwave kuda kuputswa nesimba rinokwira remadhimoni. Iwo maorcs akatorazve renje uye akavhura portal kune yepasi-nzvimbo, achiunganidza mauto ekutyisa kusingaverengeki. Iwe unofanirwa kudzivirira nzvimbo yemunhu pamberi payo & apos; yakarasikirwa nemadhimoni anoteura ropa.
Kumukira kweRoyal 2: Shongwe Dziviriro
Royal Revolt 2 inoita kuti iwe ugadzire humambo hwako sezvaunoita zvakakwana zvidziviriro, kuumba mubatanidzwa, uye kukunda humambo hwevatambi chaivo vanobva kutenderera pasirese. Mutambo uyu une yakajeka 3D giraidhi, nzira dzevadzidzi vakawanda, uye rusununguko rwekugadzira yako yega nhandare. Iwe unofanirwa kudzivirira imba yako uye kuvaka misungo inouraya kune vavengi vako.
Royal Kumukira 2 Shongwe Dziviriro
Kingdom Rush inoyemurwa chiito fungidziro yekuzvidzivirira mutambo kwaunotora parwendo rwe epic kudzivirira humambo hwako kumhomho ye orcs, trolls, varoyi uye zvimwe fiends ine hombe hombe yezvishongo nezvitsinga paunoraira. Tarisira kuti urwe mumasango, makomo uye matongo sezvo iwe uchigadzirisa yako yekuzvidzivirira zano neakasiyana manakiro kukwidziridzwa uye hunyanzvi. Iwe uchanayisa moto pamusoro pevavengi vako, shevedza zvivimbiso, raira mauto ako, tsvaga vane gumi nemana varwi uye utarisane neanozivikanwa mamota pane chako kuda kununura Kingdom yako kubva murima.
nonrepudiation inovimbisa kuti mutumwa haagoni kuramba kutumira meseji.
galaxy z peta 2 mutengo
Maitiro ekumanikidza mamiriro emamiriro ekunze kana emifananidzo muapps senge Instagram uye vamwe (Android)
Samsung Galaxy S5 mini inotanga kugamuchira Android 6.0.1 Marshmallow kugadzirisa
Verizon, T-Mobile uye AT & T throttle YouTube kana Netflix nguva dzese, zvine basa here?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite kuongorora
Ungachinja sei ringtone pa iPhone yako 8, 8 Plus, X netsika imwe: mashanu magwara ekuona
Zita rinoshamisa rinoratidza Google & apos; s inotevera-gen Pixel Buds inogona kudzora Apple & apos; s AirPods 3
Aya mana maGreen Z Flip 3 mavara anonyanya kusimbiswa
Google iri kuvhura Art Selfie - enzanisa yako selfie nemukurumbira mabasa ehunyanzvi
Samsung Level Bhokisi Mini Ongororo
Heano maapos ekuwana Google & apos; s faira nyowani maneja yeApple, Files Go